Dagaal ma dhex mari karaa Masar iyo Itoobiya wabiga Niil awgii? - BBC News Somali
Image caption Biyo Xireenka
Muxuu is marin waagaan u dhammaan la'yahay?
Lahaanshaha sawirka @realDonaldTrump
Image caption Madaxweyne Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay ergo ka socota waddamada Masar, Itoobiya iyo Sudan
"Masar waxay Hibo u tahay wabiga Nile", sidaas waxaa oran jiray faraaciintii hore, laakiin waxay Ilaah ahaan u caabudi jireen wabiga Nile-ka.
Kumannaan sano ka hor iyo waliba xilliyadii ugu dambeeyayba, Masar oo gacan ka heleysa gumeystaha Ingiriiska waxay khilaaf ku lug lahayd khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya wabiga Nile. Waxay Masaaridu damacsanaayeen in wabiga qulqulkiisa loo soo weeciyo dhankooda oo kaliya,si ay iyaga uun uga faa'iideystaan.